Unobangela wokucoca ulwelo lokufa-Yazi ukuba uyifumana njani iFilaptchat Filter
Unobangela wokucoca ulwelo lokufa- Yazi ukuba uyifumana njani iFilaptchat Filter
Disemba 19, 2020 by IJaveria Dinar
Ingcinga yokufa ithumela ukungcangcazela phantsi komqolo womntu wonke okhoyo kulo mhlaba. Kodwa wonke umntu ngokuqinisekileyo uyacinga ukuba uza kufa njani okanye nini. Lo nyaka sele uthathe abantu abathandekayo abaninzi kwiintsapho ezininzi kwihlabathi jikelele ngenxa yoko asifuni ukuba grimmer kodwa kuya kufuneka ukuba kwinqanaba elithile lobomi ucinge ngokufa kwakho kwaye kufuneka ukuba ucinge ngokwazi unobangela. Ke, unobangela wefilitha yokufa ulapha kuwe.
Yintoni unobangela wefilitha yokufa?
Ufumana njani unobangela wokucoca ukufa?
Ezinye izihluzo kunye nemidlalo malunga nonobangela wokufa
Ngokungafaniyo nezinye izihluzo kumajelo asekuhlaleni, oku kunokukukhulula kwaye kukwenze ukhathazeke. Ke, njengegama layo libonisa, isihluzi siqikelela okanye sikuxelele unobangela wokufa kwakho. Ke, isihluzo sisebenza njengomvumisi.
Icebo lokucoca ulwelo linokuba nomdla ngakumbi kubantu ababetyekele kwiingcinga ezoyikisayo okanye abalungiselela ubomi babo emva kobomi (kwinqaku elikhanyayo).
Uninzi lwenu kufuneka ukuba niyazibuza ukuba zingakanani ezi zityhilelo zicocekileyo ngokuchanekileyo. Awudingi ukuba nexhala kuba oku kokokuzonwabisa kwaye izizathu ziyahlekisa.
Ezinye zezinto ekucocwa zona zihluthiwe yinkomo, zibone uboya okanye zimamele i-6ix9ine kube kanye, ikofu, ityebile kwaye iyadika. Ezi zizathu zingakunika ukuhleka kunokuba ufe. Ke ngoko bakude kakhulu kunoyena nobangela wokufa.
Icebo lokucoca ulwelo libonelelwa nguSnapchat, ke, ukuze ufumane le fayile kufuneka ube noSpapchat kwifowuni yakho. Ukufumana isihluzo kwi-app ayisiyonto inzima. Oku kulandelayo ngamanyathelo alula okufumana ifayile kwi-app yakho.
Okokuqala vula i-Snapchat kwifowuni yakho kwaye ucofe ukhetho lwekhamera.
Cinezela nje iqhosha lokuhlola ngasezantsi ngasekunene kwesikrini.
Chwetheza 'Unobangela wokufa' kwibha yokukhangela.
Khetha icebo lokucoca ulwelo kwaye uqalise ukulusebenzisa ukuze uqhume. I icon likhakhayi elimhlophe.
Umyili wecebo lokucoca ulwelo nguNicholas Dominici.
I-Snapchat ayisiyiyo kuphela insiza ekunika ithuba lokwazi malunga nokufa. Imibuzo kaFacebook yeNametests.com yazise imibuzo ngo-2015 ukuveza ukuba uza kufa njani kwaye usekelwe nini kwimibuzo embalwa ephenduliweyo. Kodwa njengolunye uqikelelo nabo babonakala bekude nenyani kwaye behlekisa ngokunjalo.
Umyili we-AR kwi-Instagram naye utsibe kwi-bandwagon. Abadali ababini ngaba @ j.lo_roq kunye @chloeejacobs. Unokufumana ezi zihluzo kwiiakhawunti zazo. Enye indlela kukukhangela izihluzo.
Vula usetyenziso lwakho lwe-Instagram kwaye ucofe nje 'kwibali lakho' kwikona ephezulu ngasekhohlo kwesikrini. Ayizukuhlala kuluhlu lwecebo lokucoca ulwelo kude kube sekupheleni kweefilitha de ufumane i "Iziphumo zokuKhangela" (ine-icon yeglasi ephucula). Thepha oko, emva koko uchwetheze "uza kufa njani" kwindawo yokukhangela. Oku kuya kukunika zonke izihluzo ezinxulumene nesizathu sokufa. Kukho iifilitha ezi-6 ezahlukeneyo zokusebenzisa.
Ukusuka apha khetha isihluzi ofuna ukusisebenzisa, emva koko ucofe iqhosha u “Zama” kwikona esezantsi ekhohlo. Ungacofa i 'ezantsi utolo' ezantsi ezantsi ngasekhohlo. Unokucofa ngokulula kwi-selfie kunye nefuthe lokucoca okanye urekhode ividiyo yakho kodwa ucofe nje ubambe iqhosha lokurekhoda.
Ungathanda ukufunda malunga: Isihluzi seV3 esishushu
Icebo lokucoca ulwelo likunika isizathu sokufa sakho. Icebo lokucoca ulwelo kwiSapchat liza kuvelisa ilitye lokufa kunye nomfanekiso wakho kwaye ngezantsi kwawo uza kubona imihla yokuzalwa kunye nokufa kwaye ekugqibeleni yaqaqambisa unobangela wokufa.
iindidi ukonwatyiswa, iindaba, Tech tags Ungasifumana njani isizathu sokucoca ngokufa kwi-Snapchat, Yintoni unobangela wokucoca ngokufa kwi-Snapchat Post yokukhangela
ILizwi leKuki zeKrisimesi Umnyhadala: Iingcebiso kunye namaqhinga
Umceli mngeni weSephiroth kwiSuper Smash Smash Bros. Ekugqibeleni
Joyina amanye ama-25,093 ababhalisile